ठूलासँगै साना खेलाडी- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
चैत्र २५, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — म ‘यसपालि त जसरी भए पनि प्रथम त आउनै पर्छ । नत्र बुवाले अहिले पनि मोबाइल किनिदिनु हुँदैन ।’
हरि कक्षा ९ को वार्षिक परीक्षा दिनेवाला थिए । उनी आफ्नो कक्षाको द्वितीय विद्यार्थी थिए । प्रथमचाहिँ उनकै छिमेकी हरिश आउँथे । अब प्रथम स्थानमा आउन हरिले हरिशलाई जित्नुपर्ने थियो । नजिते हरिले मोबाइल नपाउने थियो ।
‘हरिशलाई त जित्नै पर्छ । अब पढेर जित्न गाह्रो छ । यदि हरिशलाई फसाएर परीक्षा दिनबाट वञ्चित पर्न सकेको खण्डमा आफू प्रथम आइन्थ्यो,’ हरिको मनमा यस्तो विचार आयो ।
यसपछि हरिले हरिशलाई फसाउने योजनाले आफ्नो दाइ मदनको मोबाइल विद्यालय लगे र खाजा खाने समयमा लुकेर हरिशको झोलामा हालिदिए । यति गरेपछि हरि प्राचार्य सरको सामू गएर ‘मैले हरिशले विद्यालयमा मोबाइल ल्याएको थाहा पाएँ’ भने । अनि सरले हरिशको झोला खोतल्नुभयो । त्यहाँ सरले हरिले भने जस्तै मोबाइल पनि भेट्टाउनुभयो ।
विद्यालयमा विद्यार्थीले मोबाइल ल्याउन नपाउने नियम भएकाले, सरले हरिशलाई आफ्नो कार्यकक्षमा लानुभयो । त्यहाँ उहाँले हरिशको बुवालाई पनि बोलाउनुभयो । प्राचार्यबाट यस्तो गुनासो सुनेपछि हरिशका बुवा तिनछक्क पर्नुभयो । हरिशका बुवाले प्राचार्यलाई विश्वास दिलाउँदै भन्नुभयो, ‘सर, मेरो छोरो इमानदार छ । तैपनि हामी एक किसान परिवार हाँै । यस्तो मोबाइल हामीकहाँ छैन । त्यसैले हरिशले यो कार्य गरेकै होइन ।’ यस्ता थुप्रा कुराहरू गरेर बल्लतल्ल हरिश र उनका बुवाले सरलाई विश्वास दिलाउन सफल हुनुभयो ।
अब हरिशद्वारा यो नियम तोड्ने कार्य नभएपछि सरले हरिलाई बोलाउनुभयो र सोधपुछ गर्न थाल्नुभयो । तर जति केरकार गरे पनि हरिले आफ्नो गल्ती मानेनन् र हरिशलाई नै आरोप लगाए । अन्तिममा प्राचार्य सरले हरिका बुवालाई पनि विद्यालयमा बोलाउनुभयो र मोबाइल देखाउनुभयो । हरिका बुवाले त्यो मोबाइल चिन्नुभयो र भन्नुभयो, ‘यो मोबाइल त मेरो जेठो छोरो मदनको हो । तपाईंकहाँ कसरी आयो ?’
अनि सरले सबै खेल बुझेर हरिका बुवालाई सब वृत्तान्त सुनाउनुभयो । त्यसपछि सरले भन्नुभयो, ‘हरिले यो विद्यालयको नियम तोडे । अझ मोबाइल ल्याएर हरिशलाई पनि फसाउन खोजे । अनि सोधपुछ गर्दा हामीसित आफ्नो गल्ती पनि महसुस गर्न मानेनन् । अब विद्यालयको जान्ने विद्यार्थी भनेर सजायबाट छुटकारा दिएमा भोलि अरू विद्यार्थीबाट पनि त यो गल्ती हुन सक्छ । त्यसैले मैले हरिको यो गल्तीको सजाय उनलाई वार्षिक परीक्षाबाट वञ्चित गराउँछु ।’
त्यसपछि हरिले त्यो साल परीक्षा दिन पाएनन् । परीक्षा नदिई प्रथम हुने कुरै आएन । प्रथम नआएपछि मोबाइल पनि पाएनन् । यता न मोबाइल पाए, न परीक्षा दिन । बिचरा, हरिश अब अर्को साल एसईईको तयारी गर्ने बेला हरि भने उही कक्षा ९ मा । यदि हरिशलाई फसाउने जुक्ति पढाइतिर लगाएको भए सायद प्रथम स्थान पनि हासिल गर्न सक्थे अनि बुवाबाट मोबाइल पनि पाउँथे । अब पछुताउनुबाहेक के नै गर्न सक्छन् र हरिले ? ‘के गर्छस् मंगले आफ्नै ढंगले’ भनेको जस्तै भएन र ?
-क्रिष्टल जीसी, कक्षा–९
जन मावि, सुर्खेत
प्रकाशित : चैत्र २५, २०७४ ११:२९